Stainless Steel Rain Shower ပိုက်သည် universal ဖြစ်ပါသလား။ ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲ? သတင်း- Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
Stainless Steel Rain Shower ပိုက်သည် universal ဖြစ်ပါသလား။ ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲ?
အခြေခံအားဖြင့် မိသားစုတိုင်းတွင် စတီးလ်မိုးထားသော ရေချိုးခန်းတစ်ခုရှိသည်။ရေချိုးပိုက်များအသုံးများသော ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများ။ ဈေးကွက်တွင် မိုးရေချိုးပိုက် အမျိုးအစားများစွာရှိပြီး တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ ဒီတော့ သင်ဝယ်တဲ့အခါ သူတို့ဟာ universal ဆိုတာကို သင်သိပါသလား။ ပုံမှန်အသုံးပြုမှုကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ။
1. Stainless Steel Rain Shower Hose သည် universal ဖြစ်ပါသလား။
တကယ်တော့ ပြည်တွင်းရေပိုက်တွေနဲ့ အခြားထုတ်ကုန်တွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ပုံသေစက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းတွေကို သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ သံမဏိရေချိုးခန်းပိုက်အများစုသည် တူညီသောအရွယ်အစားဖြစ်သောကြောင့် ဝယ်ယူသည့်အခါ ကွဲလွဲနေသည့်အရွယ်အစားအတွက် အခြေခံအားဖြင့် စိတ်ပူစရာမလိုအပ်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အချို့သောရေချိုးခန်းအမှတ်တံဆိပ်များသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အရွယ်အစားစံနှုန်းများ ရှိသောကြောင့် သင်သည် တူညီသောစီးရီးများကိုသာ ဝယ်ယူနိုင်သည်။ရေချိုးပိုက်များ.
သင်ဝယ်ယူသည့်အခါ အဆုံးမဲ့ရေချိုးပြွန်၏ အချင်းကို အာရုံစိုက်ရန် အကြံပြုထားသည်။ အချင်း၏အရွယ်အစားသည် ပလပ်ပေါက်ချိတ်ဆက်ကိရိယာနှင့် ရေချိုးခန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသင့်သည်။ ဝယ်တဲ့အခါ ပိုက်အဟောင်းကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး မှားဝယ်လို့ မရပါဘူး။
2, stainless steel မိုးရေကိုထိန်းသိမ်းနည်းရေချိုးပိုက်?
ရေပန်းပိုက်ကို နေ့တိုင်းအသုံးပြုနေသောကြောင့် စားသုံးရန်မသင့်သော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း မှန်ကန်စွာထိန်းသိမ်းထားလျှင် ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ပုံမှန်အသုံးပြုရာတွင် မကြာခဏကွေးနေသောနေရာများသည် ပျက်စီးလွယ်ပြီး ယိုစိမ့်သည်။ ထို့ကြောင့် အလွန်အကျွံ ကွေးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၊ အသုံးပြုပြီးပါက လိမ်ခြင်း မပြုပါနှင့်၊ ၎င်းကို ဆန့်တန်းထားရန် ကြိုးစားပါ။
ထို့အပြင် ရေ၏ အပူချိန်သည် အလွန်မြင့်မားမနေသင့်ပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့် 70 ဒီဂရီထက်မပိုသင့်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ၎င်းကို နေရောင်နှင့် ထိတွေ့ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များသည် အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို အလွယ်တကူဖြစ်စေနိုင်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုတောင်းစေပါသည်။